Osisi Olive - WRSP
MGBE OWU Osisi oliv
1917: Onye guzobere, Park T'aesŏn, mụrụ na northwest Korea, na South Pyŏngan Province.
1925: Park malitere ịga ụka ụka Protestant mgbe nne ya nwụsịrị.
1933: Park kwagara Japan ịga ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
1941: Park lụrụ Park Chŏngwŏn na Tokyo.
1944: Park laghachiri Korea n'ihi oke ogbunigwe nke Japan. Omyo wụlli (奧妙 ​​元 理 Iwu miri emi), bu akwukwo akwukwo mbu.
1946: Park gara ọrụ nlọghachi nke onye nkwusa ozioma nke ụka Holiness na-eduzi mgbe ọ hụrụ asụsụ ọkụ na-ada site n'eluigwe.
1949: Park zutere Chŏng Tŭgŭn, nwanyị na-ezisa ozi ọma bụ onye kọrọ na emesiri kwenye Park ka o sonye na "emume na-anọchi ọbara" metụtara mmekọahụ. Park gọrọ akụkọ ahụ.
1949: Park Yunmyŏng, nwa nwoke nke atọ nke Park T'aesŏn na Park Chŏngwŏn na onye mechara bụrụ onye nọchiri nna ya dị ka isi nke alaeze azụmahịa ya na nke okpukpe ya.
1950: Ozugbo Agha Korea dara, a manyere Park ịzopụ ndị agha North Korea. Mgbe ọ na-ezo n'ime olulu dị n'okpuru ụlọ ya, ọ hụrụ mmiri “mmiri nke ndụ” (saengsu), na o kwenyere na e si n'eluigwe zite ya.
1954: E chiri Park onye okenye na Ch'angdong Presbyterian ụka na Seoul.
1955 (March): Park bụ otu n'ime ndị isi okwu na nzukọ mmaliteghachi na Seoul wee bụrụ onye amaara maka ịgwọ ndị ọrịa na ndị ngwụrọ site na ibikwasị aka, anch'al (ịhịa aka n'ahụ).
1955 (July): Na mbido nke otu ya haziri, ndị bịara ya kwuru na asụsụ ọkụ si na mbara igwe gbadata ka Park kwusara ozi ọma.
1956: A chụpụrụ Park na ndị isi Presbyterian maka ịjụ okwukwe wee guzobe Koreanlọ Nzukọ Ndị Kraịst Christian Christian na Revival Association.
1956: Ndị na-eso ụzọ malitere ịkpọ Park dị ka Osisi Olive, Onye Ezi Omume sitere Ọwụwa Anyanwụ, na Victor.
1957: Park malitere iwu obodo mbụ ya maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi, na Sosa n'ebe ọdịda anyanwụ nke Seoul.
1957: Ndị na-eso ụzọ Park malitere ire “Mmiri nke Ndụ,” nke ha kwere nkwa na ọ ga-ewepụ mmehie.
1958: E jidere Park na ebubo nke iri ego ụka maka imerụ ndị ọzọ ihe ike ịnyịnya
1959: A mara Park mkpọrọ afọ abụọ na ọkara.
1960: A tọhapụrụ Park n'ụlọ mkpọrọ mgbe ọnwa iri na ise nọrọ n'ụlọ mkpọrọ.
1960: E jidere ndị na-eso ụzọ Park mgbe ha gbasachara mkpesa banyere akwụkwọ akụkọ na-egosi na foto nke asụsụ ọkụ na-agbadata site na mbara igwe na mbilite n'ọnwụ Park.
1961: E jidere Park na ebubo nke isonye na ntuli aka nke ntuli aka mba ma jee ozi ọnwa isii nke otu afọ.
1962: Park malitere iwu Obodo ozo maka ndi kwesiri ntukwasi obi na Tŏkso, nke owuwa anyanwu nke Seoul.
1969: T floodskso Village maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi bibiri idei mmiri na ọkụ.
1970: Park bidoro iwu obodo nke atọ maka ndị kwesiri ntụkwasị obi na Kijang, na ndịda ọwụwa anyanwụ Korea.
1970: Omyo wịlli (Profound Principles) bipụtara.
1972: nwunye mbụ nke Park, Park Chŏngwon, nwụrụ.
1974: Park lụrụ Ch'oi Oksun.
1980: Park malitere ikwu na ya bụ Chineke, yana na Akwụkwọ Nsọ bụ pasent iri itoolu na asatọ na-agha ụgha wee malite ịchọ ka ndị otu nọgide na-alụghị nwanyị na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ga-ebi iche.
1980: A gbanwere aha otu ya ka ọ bụrụ "Thelọ Nzukọ Proselytizing nke Revival Society nke Church Church nke Nna nke Eluigwe."
1981: Nwunye nke abụọ nke Park, Ch'oe Oksun, hapụrụ ya.
1990: Park nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri asaa na atọ. Nwa ya nwoke, Yunmyŏng, nọchiri ya ịbụ onyeisi nke okpukpe na azụmahịa.
2014: Nchịkọta okwuchukwu Park Taesŏn, Hananim ŭi malssŭm (Okwu nke Chineke), ka ebipụtara.
2020: Chọọchị nke Nna nke Eluigwe kọrọ na e nwere ụlọ nzukọ ofufe 124 na Korea na anọ na United States.
A maara nzukọ okpukpe a maara ugbu a dị ka Chọọchị nke Nna nke Eluigwe (Ch'ŏnbukyo 天父 敎) na mmalite afọ ya dịka Osisi Olive na ụka nke Elder Park. Elder Park bụ Park T'aesŏn (朴泰善 1917-1990), onye guzobere okpukpe a. Ma, a naghịzi akpọ ya Elder Park. Kama, a na-akpọ ya Chineke (Hananim). Agbanyeghị, mgbanwe ahụ bịara ihe karịrị afọ iri abụọ mgbe ọ hiwere Olive Tree Movement.
A mụrụ Park T'aesŏn na 1917 na northwest Korea na mpaghara Tŏkchŏn na mpaghara ndịda Pyŏngan. Oge ahụ siiri ndị Korea ezigbo ike. Naanị afọ asaa tupu mgbe ahụ Japan kwaturu alaeze Korea dị narị afọ ise a maara dị ka Chosŏn wee banye na alaeze Japan. Japan wee malite ịhazigharị akụ na ụba nke ógbè Korea iji kwado mkpa Japan. Ezinụlọ Park agbasaghị ọnọdụ akụ na ụba ọhụrụ ahụ, ya mere Park tolitere na ịda ogbenye. Iji mee ka ihe ka njọ, nne ya nwụrụ mgbe ọ dị nanị afọ itoolu na nna ya nwụrụ afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị. Ọ malitere ịga ụka ụka Presbyterian dị n'ógbè ahụ maka nkasi obi.
O mechara gụchaa ụlọ akwụkwọ elementrị, ya achọpụtazie na ya ga na-egboro onwe ya mkpa ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ịga ụlọ akwụkwọ. Mgbe ọ dị afọ iri na isii, ọ hapụrụ Korea gaa Japan. O nwere ike gụsịrị akwụkwọ na kọleji kọleji, nke ọ na-aga n'abalị ka ọ na-arụ ọrụ nwa oge dị ka onye na-enyefe nwa n'ehihie. Mgbe ọ bi na Japan, ọ gara n'ihu na mkpakọrịta ya na mbụ na Protestant Christianity, ọ bụ ezie na ọ na-ekwu na ọ bụghị ezigbo Christian ruo mgbe ọ hụrụ okenye na chọọchị ya n'elu akwa ọnwụ ya. Mgbe ọ hụrụ ka nwoke ahụ siri kpee ekpere ma bụọ abụ ruo mgbe ọ fọrọ obere ka ọ nwụọ, ọ hụkwa ka ihu ya gbukepụrụ n'ọ withụ dịka ọ nabatara ọnwụ ya na-abịanụ, okwukwe ya na Iso Christianityzọ Kraịst siri ike. (Ch'oe Chunghyŏn 1998: 42-45)
Mgbe Park gụsịrị akwụkwọ sekọndrị, ọ rụrụ ọrụ nwa oge na Tokyo. Na 1941, ọ lụrụ Park Chŏngwon (朴 貞 源. ?? - 1972). Ha laghachiri Korea na 1944 n'ihi ogbunigwe nke ụgbọ elu US nke Tokyo. Ha rutere n'oge na-aga iji hụ Korea na-enwetaghachi nnwere onwe ya mgbe ndị US meriri Japan na 1945 wee hapụ ọchịchị Korea. Di na nwunye ahụ biri na Seoul, na Park malitere na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ nhazi (Ch'oe 1998: 45-46; Moos 1967: 20). Ọ kwụsịkwara mkpakọrịta ya na Iso Christianityzọ Kraịst. Na 1946, ọ gara ọrụ mweghachi na Seoul nke onye nkwusa ozioma sitere na Chọọchị Nsọ. Park mechara kọọ na ọ hụrụ ire ọkụ nke si n'eluigwe na-agbadata dị ka ihe ịrịba ama nke Mmụọ Nsọ na-agbadata na ya na ndị ọzọ na-aga nzukọ nzukọ ahụ (Kim Chongsŏk 1999: 12-13).
Otú ọ dị, na nke mbụ ya ọ malitere iso ndị nọ ná mpụga nke Iso streamzọ Kraịst. Na 1957, ọ zutere otu nwanyị na-ezisa ozi ọma aha ya bụ Chŏng Tŭgŭn (정득 은); dị ka Park, a mụrụ ya na 1897 na northwest akụkụ Korea. Chŏng agalarị na ndịda mbido 1947 obere oge ndị Kọmunist nwetasịrị ebe ugwu. Dabere na akụkọ akwụkwọ akụkọ Seoul site na 1957, mgbe ọ kwadochara onwe ya na Seoul, ọ kpọbatara Park omume ọ kpọrọ "ịgbanwere isi ihe mmụọ." Emume a na-eme ka mmadụ wepụsị mmehie nke mmehie mbụ site n'ahụ ya wee nwee mmekọahụ na nwoke na nwanyị na-emebeghị ya iji soro onye òtù ọlụlụ ya kerịta ihe enweghị mmehie ọ bụla. A kwenyere na mmekọrịta a na-enwe mmekọahụ na-agbanwe mmiri nke anụ ahụ na mmiri mmiri dị ọcha nke na-enweghị nsogbu nke mmehie mbụ. Ọ bụ ezie na a kọọrọ na ihe omume a mere na 1949, Park gọrọ ya nke ọma mgbe akwụkwọ akụkọ akụkọ pụtara na 1957. A kọkwara na nwunye Park sonyere n'ememe a, n'agbanyeghị na agọnarị ya (Choe Joong-hyun 1993: 145- 57).
Ma ọ bụ ezie na ya na Chŏng Tŭg orn sooro na ngwụcha 1940s, ọ laghachiri ngwa ngwa na Protestantism Korea. Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya ọ kwụsịrị ịhapụ ngosipụta ihu ọha nke okwukwe Ndị Kraịst ya ruo ọnwa ole na ole. Na June 25, 1950, North Korea wakporo South Korea ma merie Seoul ngwa ngwa. Ndị Kraịst enweghị nchekwa na Seoul nke North Korea na-achịkwa. Ndị isi ike enweghịkwa, na Park bụcha ha abụọ. N’izu atọ mbụ Seoul biri, Park zoro n’otu olulu n’ime ala ọ gwuru n’okpuru ụlọ ya ma gosighị ihu ya n’ihu ọha.
Mgbe ọ na-ezo n'ụlọ ya, Park na-akọ, ọ nwere ahụmịhe dị omimi. Ọnụ ya na akpịrị ya kpọrọ nkụ mgbe ọ na-atụghị anya ya hụrụ mmiri jụrụ oyi na-apụta n'egbugbere ọnụ ya, ọ tụkwara na ume ọhụrụ na mberede. O kpebiri na e nyela ya mmiri site n’eluigwe, nke Chineke nyere azịza ekpere ya. Ọ kpọrọ mmiri ahụ “mmiri nke ndụ,” okwu o ji mee ihe maka mmiri nke e mechara kesara ndị mechara soro soro ya mgbe ọ gachara Olive Tree Movement (Ch'oe 1998: 54-55).
Park nwere ahụmịhe ọhụụ nke abụọ mgbe ọ gbanahụrụ Seoul bi na ya wee zoo n'otu obodo dị ọtụtụ kilomita na ndịda. N'ebe ahụ ọ hụrụ na mberede na mgbe ọ na mamịrị, a gwakọtara ọbara na mmamịrị ya. Ọ tụrụ ya n’anya nke ukwuu na mgbe ọ nyịa mamịrị ọbara, ọ bịara dị ya ka ọ karie ike. Ọ sịrị na ọ ghọtara na ọbara ọ na-achụpụ n'ahụ ya bụ ọbara merụrụ emerụ nke mmehie mbụ. Mgbe ahụ, ọ hụrụ ọhụụ ka Jizọs na-agba ọbara site na ọnyá ya na obe pụtara n'ihu ya ma na-agwa Park, "rinkụọ ọbara m." Park kwuru na Jizọs tinyeziri ọbara ya n'egbugbere ọnụ Park. Mgbe ọ loro ọbara ahụ, Park kwuru na ya ghọtara na ọbara ya dị ọcha nke Jizọs gbanwere ọbara ya wee bụrụ na ya na Jizọs (Ch'oe 1998: 55-56).
Ka ọ na-erule ngwụsị nke September 1950, Seoul alaghachiri n'aka ndị South Korea, Park nwekwara ike ịlaghachi na Seoul na ọdịda ahụ. Otú ọ dị, agha ahụ gara n'ihu ruo n'oge ọkọchị nke 1953. Akụkụ akụ na ụba South Korea lara n'iyi, na ọtụtụ afọ mgbe e debanyere ọkụ ahụ na July 1953, ndị Korea na-achọ ụzọ ọ bụla si na ịda ogbenye ha. Ọtụtụ n’ime ha chọpụtara na ọnya ahụ mere ka ihe sikwuoro ike (na, ụfọdụ, ọnwụ nke iji aka na aka ha) ahụhụ ha tara n’oge agha ahụ. Nchọgharị ha maka enyemaka gbatịpụrụ n’ógbè karịrị ike mmadụ. Mgbe agha ahụ bisịrị, ọtụtụ ndị Korea bidoro ịbata n ’ụlọ ọrụ maka mbilite n’ọnwụ na-atụ anya na Chineke ga-azọpụta ha n’ọnọdụ ọjọọ ha nọ na ya.
Ka ọ na-erule afọ 1954, Park nọ na-enyere aka na mbilite n'ọnwụ ndị ahụ dịka onye na-enyere ndị nkwusa na ndị ji okwukwe agwọ ọrịa aka. N’oge ọkọchị ahụ, ọ wepụtara onwe ya ịbata n’ime mgbe otu onye ji okwukwe na-agwọ ọrịa, aha ya bụ Pyŏn Kyedan, dọtara ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ọgwụgwọ ka ọ laghachị, mana ha ga-ahapụ obodo ahụ tupu ya enwee ike ịbunye ha niile. na aka ndi kwesiri ibusa ike nke Chineke n’ime aru ha ma gwo ha. Mgbe Park malitere inye anch'al (aha Pyŏn jiri maka ịhịa aka siri ike ọ nyere ndị bịakwutere ya ka ọ gwọọ ha), dị ka opekata mpe otu na-akọ "ndị kpuru ìsì meghere anya ha, ndị nwere nkwarụ ụkwụ biliri, ndị nwere nkwarụ na-aga ije walked" (Choe 1993: 80) Nke ahụ bụ mmalite nke ọrụ Park dị ka onye nkwusa ozioma-okwukwe na-agwọ ọrịa. [Foto dị n'aka nri]
Na ọnwa Disemba nke 1954, a họpụtara Park ịbụ okenye na Ch'angdong Presbyterian Church. N’oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, a malitere idepụta ya na marquee maka nnukwu mbido. (Ch'oe 1993: 80-82) Na-adọta ìgwè mmadụ buru ibu ma buru ibu n'ihi akụkọ na Mmụọ Nsọ na-egosipụta onwe ya dị ka ire ọkụ ma ọ bụ tụlee nke igirigi dị nsọ mgbe ọ na-eme nkwusa, o guzobere nzukọ nke ozi ọma ya, nke ọ kpọrọ Korea Association maka Revival Ndị Kraịst. Nke ahụ, ya na nkwupụta ya na ike ịgwọ okwukwe pụrụ iche, kpasuru iwe nke ọtụtụ ndị nkwusa Presbyterian ndị ọzọ nke Korea. Na 1956, a chụpụrụ ya na obodo Presbyterian dị na Korea. (Choi 1993: 84-87)
Park gbanwere aha nzukọ ya na-enweghị onwe ya ugbu a gaa Koreanlọ Nzukọ Ndị Kraịst nke Ndị Kraịst na Revival ("angellọ Nzukọ Evangelizing" na Korea bụ chŏndogwan (傳道 館) (Ch'oe 1993: 71) Nke ahụ ghọrọ ụzọ usoro ya si dị. zoro aka na Korean rue 1980. Ugbu a na nke onwe ya, na November ọ malitere ịkpọ onwe ya n'ihu ọha dịka "Osisi Olive" (감람 나무), na-ezo aka na Nkpughe 11: 4. Usoro a na Bible na-ezo aka Osisi Olive abụọ na-eje ozi dị ka ndị akaebe dị ike banyere ike nke Chineke dị n'elu.Nke a doro anya, Park ahụlarị onwe ya anya dị ka onye pụrụ iche yana ewezuga ndị na-agbasa ozioma na Korea peninsula na oge ahụ. Ndị na-abụghị ndị Korea, na-achọpụta na aha a na-adịghị ahụkebe maka Onye ndu Christian chere, bidoro zoo aka na ngagharị Park dị ka Olive Tree Movement (Kim 1999: 21-22).
Ndị na-eso ụzọ Park bidoro na-akpọ ya Onye mmeri (이긴 자) yana "onye ezi omume si ọwụwa anyanwụ" (東方 一 人). A na-ezo aka na Onye mmeri na Mkpughe 3: 12 dị ka onye Chineke ga-eme ka ogidi nke ụlọ nsọ Chineke. A kpọtụrụ onye ezi omume ahụ sitere n’ọwụwa anyanwụ n’Aịzaya 41: 2 dị ka onye Chineke mere ka ọ chịa ndị eze. Okwu ọzọ ejiri mee ihe iji zoo aka na Park mgbe e mesịrị, ọ bụ ezie na ọ nweghị onye ọzọ na Bible, bụ "nne ime mmụọ" (1985 母) (Pak 336: 42-XNUMX).
Ka obodo ahụ na-adabere na nduzi ime mmụọ ya na-eto ọbụna mgbe ndị isi okpukpe malitere ịjụ ya, Park kpebiri ịmepụta obodo dị iche iche nke ndị na-eso ụzọ ya ga-ebi ma rụọ ọrụ. Obodo mbụ dị otú a, nke ọ kpọrọ "Obodo maka ndị kwesiri ntụkwasị obi" (信仰 村), wuru na mpaghara Sosa na ọdịda anyanwụ Seoul. O kwere nkwa na ndị mmadụ 144,000 ga-emesị họrọ ndị ga-ebi ebe ahụ ma nwee ndụ ebighi ebi n'ime ihe ga-abụ paradaịs n'elu ụwa (Kim 1999: 23). Obodo mbu ahụ maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi, nwere ike ịnweta ụlọ ole na ole nke ndị kwere ekwe ya. Ya mere na ndị ahọpụtara ole na ole bi ebe ahụ agaghị ahapụ obodo ahụ ma soro ndị na-ekweghị ekwe na-anọkọ n'èzí mgbe niile, ọ nwekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ndị kwere ekwe rụrụ ọrụ iji mepụta textiles na ngwaahịa ndị ọzọ na-ere maka ire ere na mpụga ụwa ( Moos 1967: 16; Ch'oe 1998: 74).
Ọ bụghị naanị ngwaahịa ndị ahịa na-erekarị. Ha rere ihe ha kpọrọ “mmiri nke ndụ (生水),” nke ha kwere nkwa na ọ ga-ehichapụ unyi nke mmehie kamakwa na ọ ga-eweghachi ike ntorobịa na nke ochie na nke na-esighi ike. Mmiri nke ndụ bụ mmiri nke Park gọziri. Ọ bụ ihe nnọchi maka ọgwụgwọ okwukwe na ịhịa aka na nzọpụta (anch'al 按 擦), nke chọrọ ka ebikwasị aka n'aka Park ma sie ike inye ọtụtụ ndị kwere ekwe rịọrọ ya (Pak 1985: 347 -52).
Na ngwụsị afọ ndị 1950, ike nke ebe Park jiri nye anch'al yana ọgwụgwọ nke “mmiri nke ndụ” kwere nkwa mee ka Park nwee nsogbu na gọọmentị South Korea. Na mbido 1958, e boro ya ọtụtụ mpụ, gụnyere ịkpata mmerụ ahụ na ọbụna ọnwụ site na anch'al, yana igwu ndị na-eso ụzọ ya egwu site na nkwa ịgwọ ha iji gbanwere "onyinye." A mara ya ikpe ịga mkpọrọ afọ abụọ na ọkara na 1959, n'agbanyeghị na a tọhapụrụ ya mgbe naanị ọnwa iri na ise nọ n'ụlọ mkpọrọ. Agbanyeghị, a tụbara ya n'ụlọ mkpọrọ ọnwa ole na ole ka nke ahụ gasịrị maka ebubo nke inye aka n'ịgbasa ntuli aka onye isi ala maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye isi ya, Onye isi ala Syngman Rhee, nyere ya ohere ịhapụ ya n'oge. N'oge a, ọ nọrọ ihe na-erughị otu afọ n'ụlọ mkpọrọ. (Moos 1967: 23-24)
Mgbe ọ ka nọ na mkpọrọ mbụ ya, ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Park wepụrụ iwe ha n'ụzọ ndị ọchịchị na-emeso ya site na ịwakpo ụlọ ọrụ nke akwụkwọ akụkọ ndị bụ isi. Ihe dị ka ụmụ nwanyị 2,000 n'ime ndị òtù ya obodo manyeere ha n'ọfịs nke Donga Ilbo ịrịọ mgbaghara maka akwụkwọ akụkọ ahụ na-ekwu na foto nke asụsụ ọkụ na-agbadata site na igwe mgbe Park kwusara ozi ọma (Kim Chang Han 2007: 217). [Foto dị n'aka nri]
1962 bụ afọ ikpeazụ Park nọrọ oge ọ bụla n'ụlọ mkpọrọ. N'oge na-adịghị anya ka a tọhapụsịrị ya, ọ malitere iwu nke abụọ, ma buru ibu, Obodo maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi, oge a na mpaghara a na-akpọ Tŏkso na ógbè Yangju nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Seoul. Dị ka Obodo mbụ maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi, nke a bụ obodo zuru ezu maka ndị na-eso ụzọ Park, na-enye ọ bụghị naanị ụlọ kamakwa ebe ọrụ yana ụlọ akwụkwọ. Ngwaahịa ndị ahịa na-emepụta na ụlọ ọrụ ndị dị na Obodo ndị ahụ maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi, nke a na-ere ahịa n'okpuru akara Zaịọn, na-asọ mpi n'ahịa ndị ahịa na Korea n'oge ahụ, na-enweta ego dị ukwuu maka Park na nzukọ okpukpe ya. Thelọ ọrụ dị na Tŏkso kpaliri obodo Park gabigara textiles na nri n'ime ngwaahịa ụlọ ọrụ nchara, dị ka agbatị bọl (Kim Chongsŏk 1999: 27-28). Park na-ewu ma alaeze okpukpe na nke azụmahịa.
Mgbe e wuru Obodo nke abụọ maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi, Park webatara ememe okpukpe dị mkpa nye ndị obodo ya. N'ụbọchị nke atọ ma ọ bụ nke ikpeazụ nke ọnwa ọ bụla, ndị na-eso ụzọ Park na-atụ anya ịbịakọta na T inkso Village maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi maka ofbọchị Ngọzi. N'oge ọrụ okpukpe, ha ga-enweta ngọzi site na karama nke "mmiri nke ndụ" (Kim Chongsŏk 1999: 29-30; Kim Chang Han 2007: 219).
Na 1969, Park malitere ịdaba na nsogbu. Na Jenụwarị nke afọ ahụ, ọkụ gbara obodo nta Tŏkso maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi. Mmebi ọzọ mepụtara site na oke ide mmiri nke otu mpaghara ahụ n'oge ọkọchị. Ọzọkwa, ada Park nwụrụ site na ọnya afọ n'otu afọ (Kim Chongsŏk 1999: 31) Nkwupụta Park nwere ike ịgwọ ọrịa, imeri ọnwụ, ma mepụta paradaịs n'elu ụwa malitere ịkwụsị inwe ntụkwasị obi n'etiti ụfọdụ ndị na-eso ya. . Otú ọ dị, Park laghachiri na n'afọ na-esote, na 1970, malitere ịfefe isi obodo ya maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi na ebe ọhụrụ, na ọbụna karị, ebe dị nso na ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula, na Kijang na mpụga obodo Pusan. N'afọ ahụ ndị na-eso ụzọ ya bipụtara akwụkwọ ntuziaka maka ịgụ Bible n'ụzọ ọ chọrọ ka a gụọ ya. Akwụkwọ ahụ, Omyo wụlli (奧妙 ​​元 found foundkpụrụ miri emi), bụ onye bụ isi Akwụkwọ Nsọ nyere ndị na-eso ụzọ ya ruo na njedebe nke afọ iri, mgbe ọ hapụrụ nkọwa mbụ ya banyere Akwụkwọ Nsọ ma pụọ ​​ọbụna n'ebe dị anya site na ndị isi ụka Protestant (Park Yŏnggwan 1993: 141-59) .
Na 1972, nwunye mbụ nke Park, Park Chŏngwon, nwụrụ, ikekwe n'ihi ihe mberede okporo ụzọ (Kim Chongsŏk 1999: 33-34). O ghaghi inye ya ndu ebighi ebi kpatara ufodu ndi otu ndi otu Olive Tree nwere obi abua, mana enweghi ihe akaebe na enwere otutu ndi otu n'ime oge a (obu ezie na enweghi onu ogugu ndi kwesiri ntukwasi obi maka ịbụ onye otu n'otu oge). Mgbe afọ abụọ gachara, ọ lụgharịrị di. Nwunye ọhụrụ ọ lụrụ bụ Ch'oe Oksun, n'oge ahụ ọ bụ onye na-eso ụzọ ya. Otú ọ dị, nke ahụ gbanwere na 1974. Otu ụtụtụ, ọ hụrụ ka ọ na-agbapụta ọbara ma yie ka ọ na-atụ ụjọ ọnwụ na-abịanụ. Nke a mere ka okwukwe ya gharazie inwe ike inye ya ndụ ebighị ebi. Afọ ise mgbe nke ahụ gasịrị, na 1981, ọ hapụrụ ya na Obodo nta ya maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi (Ch'oe Chunghyŏn 1998: 81-82, 90-94).
Ch'oe Oksun chọpụtara banyere ọnwụ Park nwere ike ọ bụghị naanị ihe kpatara ya enweghị okwukwe na ya wee hapụ ya na 1981. Na 1980, o nyere iwu ka a kpọpụ ya n'ime Obodo Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi ma ghara ịkpọtụrụ ndị ọzọ nọ n'obodo ya . O kwupụtakwara mgbanwe dị egwu n'ihe ọ tụrụ anya na ụmụazụ ya ga-ekwere. O kwuputara na Akwụkwọ Nsọ bụ ụgha iri itoolu na asatọ na Jizọs abụghịkwa nwa Chineke kama kama ọ bụ nwa Setan. Ezi Chineke ahụ, onye okike nke eluigwe na ala na onye ga-achị ikpe ikpe ikpeazụ na njedebe oge, yana naanị onye nwere ike ịzọpụta ụmụ mmadụ, abụghị onye ọzọ karịa Park T'aesŏn n'onwe ya. O kwupụtakwara na ya ebiela n'ụwa maka afọ 5,780 na ọ gaghị anwụ anwụ (Ch'oe Chunghyŏn 1998: 85-89) N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, ọ gbanwere aha ndị okpukpe ya "Prolọ Nzukọ Na-emegharị Anya nke Revival Society nke Chọọchị Korea nke Nna nke Igwe. ” Nna nke Eluigwe kwuru maka Park, ọbụghị Onye Kachasị Elu nke Onye Kraịst. N'ịbụ onye mgbanwe a na mberede gbanwere na ntọala mmụta okpukpe nke Olive Tree Movement, ọtụtụ ndị na-eso ụzọ hapụrụ ije ya. Cho Hee-seung (1931-2004) bu otu n’ime ndi lapuru, o gara n’ihu ichota otu ndi okpukpere chi nke ha na aha ya bu Victory Altar.
N'adaghị mbà site na ọpụpụ nke ọtụtụ n'ime ndị leburu anya ya dị ka onye ndu ndu mmụọ ha, Park na-achịkwa ndị na-eso ụzọ ahụ nọgidere. O kwuputara na ndị na-eso ụzọ ya agaghịzi eso ndị di ha ma ọ bụ nwunye ha dinara. Kama, o choro ka nwoke na nwanyi biri iche. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, njem ya nwere ụlọ nzukọ dị iche iche maka ndị nwoke na ndị nwanyị. Ọtụtụ n'ime ndị di na nwunye jikọtara ọnụ gbara alụkwaghịm, ya na ndị ikom ahụ na-ahapụ obodo ahụ, na-eke ọtụtụ ụmụ nwanyị (Kim, Chongsŏk 1999: 45-47).
Na 1990, Park, onye kwuputara na ya anwughi anwu ma kwe ndi na-eso uzo ya nkwa nke anwughi anwu, gbara mgbe o ruru iri asaa na ato. Ọnwụ ya nwere ike bụrụ ihe ịtụnanya kasịnụ nye ndị ka kwere na ozi ya. Park gbalịrị ịkwadebe ụmụazụ ya ole na ole fọdụrụ maka ọnwụ ya site na ịkọwa na ọ bịara n'ụwa dịka nwa atụrụ iji chụọ aja mmehie nke ụwa a mana ugbu a ọ rụchara ọrụ ahụ, oge eruola ka ọ pụọ (Kim , Chongsŏk 1999: 51-58) Ka o sina dị, mgbe ọnwụ a gasịrị, Chọọchị nke Nna nke Eluigwe dara.
Nwa ya nwoke nke atọ, Park Yunmyŏng, ghọrọ onye ndu nke ma ndị okpukpere chi na ụlọ ọrụ achụmnta ego ya ma nọgide na-elekọta ya. O mere ndokwa ka okwu nna ya site na 1980s (mgbe Park T'aesŏn kwupụtara na ya bụ Chineke n'onwe Ya) chịkọtara n'ime akwụkwọ iji dochie ntuziaka nkuzi nke 1970s, Omyo wụlli. Kama akwụkwọ ntuziaka mbụ ahụ maka ịgụ Akwụkwọ Nsọ, ndị otu Nzukọ nke Nna nke Eluigwe malitere ịdabere na ya Hananim ŭi malssum (Okwu Chineke), nke ebipụtara na 2014, iji duzie ndụ ime mmụọ ha.
Agbanyeghị na enweghị atụmatụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, o doro anya na mbelata nke ọnụ ọgụgụ ụlọ nzukọ na-ebelata na ndị nọ na ya. N'afọ 1970, mgbe ngagharị ya ka na-akpọ onwe ya "Evlọ Nzukọ Evangelizing" (chụndogwan), ọ na-ekwu na ya nwere ụlọ nzukọ ofufe 1,700 na peninshula. (T'ak Myŏnghwan 1994: 202) Na 1990s, Chọọchị nke Nna nke Eluigwe kwuru na ha nwere ụlọ nzukọ ofufe 300 (Kim, Ryu, na Yang 1997: 734). Na 2020, webusaiti webatara naanị ụka 124 na Korea n'onwe ya tinyere anọ na United States.
Ọ bụ ezie na Park T'aes movementn adịghịzi ahụ anya na peninsula Korea dị ka ọ dị na mbụ, ọ na-aga n'ihu na-emetụta ebe okpukpe Korea. E nwere ọtụtụ mmegharị okpukpe ọhụrụ na Korea nke nwere mgbọrọgwụ na Olive Tree Movement. Mmeri Mmeri, nke a kpọtụrụ aha n’elu, bụ otu. Onye ọzọ bụ Shincheonji. Onye guzobere Shincheonji, Lee Man Hee (1931—), na-arụsi ọrụ ike na Olive Tree Movement site na 1956 ruo 1967. Aha nzukọ okpukpe ya, nke ewepụtara site na Mkpughe: 21, bụ okwu izizi ụzọ dị mkpa na okwu izizi mbụ. nke Park T'aesŏn, onye kwere nkwa na ya na-ewugharị Eluigwe Ọhụrụ (shincheon) na Earthwa Ọhụrụ (Shinji) maka ndị ezi omume.
Nkwenye doro anya nke Churchka nke Nna nke Igwe bụ na nwoke a maara dị ka Park T'aesŏn bụ Chi kachasị elu. Ndị kwere ekwe na-akpọ ya Hananim, okwu nke Chineke na-ejikwa ụlọ ụka Protestant bụ isi (Don Baker 2002: 118-19). A naghị elekarị ya anya dị ka Chineke. Na mbu ọ bụ naanị Elder Park, aha o nwetara na ụka Presbyterian tupu ọ gawa n'onwe ya. (Akpọghị ya Rev. Park n'ihi na a họpụtaghị ya onye ụkọchukwu.) E mesịa, malite na 1956, ọ tụkọtara utu aha ndị ọzọ, dị ka Osisi Olive, Victor, Onye Ezi Omume ahụ Si Ọwụwa Anyanwụ, na Ọbụna Nne Ime Mmụọ . Ọ bụghị rue 1980 ka ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya na ya bụ onye okike nke eluigwe na ala na onye ọka ikpe ga-ekpe ikpe ikpe ikpe ikpeazụ ya mere a ga-akpọ ya Hananim.
Mgbe a maara mmegharị Park dị ka Olive Tree Movement, a na-ahụta Halllọ Nzukọ Alaeze dịka ụka Ndị Kraịst. Nke ahụ gbanwere na 1980 mgbe Park kwupụtara na pasent iri itoolu na asatọ nke Akwụkwọ Nsọ bụ ụgha na Jizọs bụ n'ezie nwa Setan. Ndị otu okpukperechi ya, n’aha ọhụrụ nke Churchka nke Eluigwe, anaghịzị akọwa onwe ha dịka Onye Kraịst. Agbanyeghị, ọ ka nwere ọtụtụ nkwenkwe ndị gosipụtara mmalite ya na Iso itszọ Kraịst. Otu nkwenkwe bụ isi bụ na Chineke gbadatara n'ụwa iji sachapụ mmehie nke ụmụ mmadụ. Obu nmehie ndi ahu nke neme ka madu ghara inwe ndu ebighebi na ala eze nke elu igwe. Ihe muchka nke Nna nke Igwe soro Kraist. Ot'odi, nkowa ya maka ihe kpatara nmehie ji egbochi madu inwe ndu ebighebi di iche na nkowa nke ndi Kristian putara.
Dabere na nkuzi nke Park T'aesŏn, tupu a zoputa ha, mmadu bu ihe mejuputara n'ime ihe omimi, ihe akaebe ya bu na ha aghaghi igbapu ahihia. Agbanyeghị, akụkụ kacha metọọ mmadụ bụ ọbara ha (Hananim ŭi malssum, “Nanị Mmụọ Nsọ nke Na-enye Nzọpụta”) Ọbara ha nwere ike ịsacha, ma gbanwee ahụ ha iji wepụ ihe diabolical ya, mana naanị site na Akwụkwọ Nsọ. Nna nke Elu-igwe n’enye. N’ime okwuchukwu ya ụfọdụ, Park pụtara na-egosi na enwere oke mmadụ ole ga - esi gbanwee ya wee kwe ka ha banye n’eluigwe. Ọ na-atụ aro na ọ ga-azọpụta naanị mmadụ 144,000 (Hananim ŭi malssum, “Nwa Atụrụ ahụ bụ Chukwu”).
Mgbe ụfọdụ Akwụkwọ Nsọ ahụ nke na-eme ka nzọpụta ga-ekwe omume pụtara dịka mmiri nke ndụ (Hananim ŭi malssum, “Threezọ Atọ Perzọ Zuru Ezu”), nke ndị otu ụka juru n’ime ya ma resị ya ndị kwere na nrụpụta ọrụ ya. N'oge ndị ọzọ, Otú ọ dị, Igirigi Nsọ na-ada site n'eluigwe mgbe a na-eme ụka. A kwenyere na Mmiri nke Ndụ na Akwụkwọ Nsọ na ọ bụghị naanị na-ehichapu mmehie, ha na-ekwukwa na ha na-agwọ ọrịa na ahụ mebiri emebi (Pak Kiman 1985: 346-50).
N'ịghọba n'isi mmalite nke Ndị Kraịst ya, ndị churh kpọrọ Holy Igiriri "Igirigi nke Mmụọ Nsọ." Agbanyeghị, ọ bụ Nna nke Eluigwe Park T'aeson bụ onye na-ezipụ Mmụọ Nsọ ahụ si n'eluigwe ma ọ bụ Nna nke Eluigwe bụ onye, ​​mgbe ọ nọ n'ụwa a, tụgharịrị mmiri nkịtị ka ọ bụrụ Mmiri nke Ndụ site n'ịgọzi ya. Kemgbe 1990, Mmiri nke Ndụ enwetara site na mmiri nke na-esi na isi mmiri dị n'okpuru ili Park T'aesŏn n'ime obodo Kijang maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi.
N'okwu ọzọ na mmalite nke mmalite nke Ndị Kraịst, chọọchị ahụ na ọtụtụ ụka ụka Ndị Kraịst nke Korea na-ekwusi ike na njedebe ụwa yana nkwenye na njedebe dị nso. Agbanyeghị, ụka ahụ doro iche site na nkuzi ya na na ikpe ikpe ikpeazụ, nke ga-eso njedebe nke ụwa, Onye Ikpe Ikpeazụ ga-abụ Park T'aesŏn, ebe ọ bụ Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile n'onwe ya. Park kụzikwara na n'oge ikpe ikpeazụ, mmadụ niile dịworo ndụ ga-agbanwe nwa oge gaa chi, site na nke ọ pụtara na ha ga-abụ ndị mmụọ nwere ike ịhụ nke ọma ihe mmadụ ọ bụla ọzọ mere mgbe ha dị ndụ. Nka geme ka madu nile hu ka ha mehiere na ndi kwesiri ka azoputa ha, nke mere na mgbe ndi nmehie rida nala mo na idi nso rigoro nelu igwe, odigh onye puru isi na ikpe ikpe azu adabaghi ​​(Hananim ŭi malssŭm, “Ikpe nke Chineke, ngosi ”). Agbanyeghị, nzọpụta bụ maka ezinụlọ, ọ bụghị maka ndị mmadụ n'otu n'otu. Mgbe a zọpụtara otu onye, ​​ezinụlọ ya ga-enwe ike iso ya rigo n’eluigwe.
Na Sọnde nkịtị, ndị kwere ekwe na-efe ofufe n'ụlọ nke yiri ụka Protestant Korea. [Foto dị n'aka nri] Ọzọkwa, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-efe ofufe n'ụlọ nzukọ dị iche iche. Nke a abụghị naanị nnukwu ihe dị iche na ofufe ofufe nke okpukperechi Ndị Kraịst nke Korea. Ọrụ a na-amalite site na ọgbakọ na-ekere òkè na abụ ukwe, dịka na ụka ndị Kraịst. Otú ọ dị, kemgbe 1980, okwu abụ ndị ahụ dị nnọọ iche n'ihe ndị bụ isi Ndị Kraịst na-abụ. Ebe ọ bụ na ụka na-akụzi na Jizọs bụ nwa ekwensu karịa nwa Chineke, onweghị abụ na-eto Jizọs. Akụkụ ọzọ dị iche iche nke ọrụ ụka bụ na ndị nọ n'ọgbakọ na-akụ aka n'olu dara ụda ka ha na-abụ abụ. Nke a bụ ihe ụmụazụ Park T'aeson mere kemgbe afọ 1950. Kemgbe 1990, Park T'aesŏn n'onwe ya ka na-abụ abụ nke abụ. Ebe ọ bụ na ọ nọzighi n’elu ụwa a, ọ pụtara ugbu a na vidio ndị na-eduzi abụ ahụ.
Dị ka ọ dị na obodo ndị Protestant na Korea, a na-agụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ n'oge ọrụ Sọnde, mana akụkụ Akwụkwọ Nsọ na nke a bụ Hanannim ŭi malssŭm (Okwu nke Chineke). E nwekwara okwuchukwu, ọ bụ ezie na ọ bụkarị okwu nkuzi vidiyo Park T'aesŏn nyefere tupu ọnwụ ya. Ọzọkwa, kama ịnọ ọdụ na pipụ iji gee okwuchukwu ahụ, a na-atụ anya ka ndị na-efe ofufe gbuo ikpere n’ala n’ala dị ka ihe na-egosi nkwanye ùgwù.
Na mgbakwunye na ọrụ Sunday ọ bụla, Chọọchị nke Nna nke Igwe nwere ụbọchị nsọ anọ pụrụ iche. Ebe ọ bụ na ọ bụghịzị onye nke Kraist, ọ naghị agba ekeresimesi ma ọ bụ Ista. Kama nke ahụ, a gwara ndị kwere ekwe ka ha zukọta na Kijang Village maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi maka ọrụ anọ ahụ pụrụ iche.
Gburugburu nke abụọ ka ọ bụrụ nke ikpeazụ ma ọ bụ Sọnde ikpeazụ nke ọnwa ọ bụla, ndị kwere ekwe na-ezukọ na Kijang Village maka Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi maka ihe a na-akpọ Ememme Ngọzi iji mee ememe nke Mmiri nke Ndụ si na Chineke (Park T'aesŏn). Ha kwenyere na Mmiri nke Ndụ nwere Igirigi Nsọ nke na-asachapụ mmehie. Enwere nnọkọ dị iche iche maka ụmụ nwoke ndị kwere ekwe, ụmụ nwanyị kwere ekwe, na ụmụ akwụkwọ.
Na mgbakwunye na nzukọ ndị a na-enwe kwa ọnwa, ha na-ezukọ kwa ọnwa Febụwarị kwa afọ maka ihe ha kpọrọ Sŏngsin samoil (“ịkwanyere Mmụọ Nsọ ùgwù,” emume ncheta ọmụmụ nke Park T’aesŏn). Na Sọnde nke atọ n'ọnwa Mee kwa afọ, ha na-ezukọta ime emume Yisŭl sŏngsinjŏl (mmemme nke ụbọchị Mmụọ Nsọ gbadatara dị ka Igirigi Nsọ iji sachapụ mmehie). Na kwa afọ n’abalị mbụ n’ime ọnwa Nọvemba, ha na-ezukọ maka inye ekele. N'ụbọchị ndị a dị nsọ pụrụ iche ndị kwere ekwe ga-ezukọta maka ọrụ pụrụ iche na Kijang Village of the Faith.
E wezụga ịga ọrụ ofufe, a gwara ndị kwere ekwe ka ha rubere Iwu Iri ahụ ma n'omume ha ma n'obi ha. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwaanyị eche naanị gbasara ịkwa iko, ha akwaala iko. Chọọchị nke Nna nke Igwe na-akpọ nke a Iwu nke Nnwere Onwe (Hannim ŭi malssŭm, "Ọ bụghị imehie na anya, obi, ma ọ bụ echiche bụ idebe iwu nke nnwere onwe"). Iwu nke nnwere onwe na-ezo aka na nnwere onwe ime nhọrọ. Chọọchị nwere nkwenkwe ndị isi nke Ndị Kraịst na ụmụ mmadụ nweere onwe ha ịhọrọ ma ha ga-agbaso iwu Chineke ma ọ bụ inupụ iwu ndị ahụ. Ọ bụrụ na ha họrọ ịgbaso iwu nke Chineke, a ga-eji ndụ ebighi ebi kwụghachi ha ụgwọ, mana ọ bụrụ na ha kpachapụ anya nupụrụ iwu ndị ahụ isi, a ga-ata ha ahụhụ ruo mgbe ebighị ebi. Dị ka akwụkwọ nsọ ụka si kwuo, “hell agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ị zuru ohi ọbụna penny” (Hannim ŭi malssŭm, “Threezọ Atọ N’ebe Zuru Okè”). Akwụkwọ nsọ gara n'ihu ịgbakwunye na "ọ dịghị onye ọ bụla akara aka maka hel ga-eme mkpesa, n'ihi na a nyelarị nduzi m ọtụtụ ọnụọgụgụ wee leghara ya anya n'oge ndụ ha na-anwụ anwụ" (Hannim ŭi malssŭm, “Ikpe Chineke, Nke Dị Mma”.)
Na mgbakwunye na irube isi na Iwu Iri ahụ n’ime na n’èzí, a na-enyezikwa ndị otu ụka iwu ka ha rube isi na mmachi ụfọdụ ndị ọzọ. Kemgbe 1980, achọrọ ha ịhapụ mmekọrịta mmekọrịta. A gwara ha ka ha ghara iri anụ ezì, piich, na eel, n'ihi na e kwuwo na nri ndị ahụ adịghị ọcha. A machibidoro ha iri nri a na-enye mmụọ mmụọ nna ochie na ememe ncheta nna ochie nke Korea na ịjụ isonye na emume a. N'ikpeazụ, a ga-eli ndị nwụrụ anwụ kama a ga-akpọ ha ọkụ.
Mgbe Park T'aesŏn nwụrụ na 1990, ndị isi nke ma ndị okpukpe ya na ụlọ ọrụ azụmaahịa nyefere nwa ya nwoke nke atọ, Park Yunmyŏng. Onye ndu ohuru enweghi ikike nke nna ya. N'ezie, a maghị onye nketa ahụ n'ihu ọha. Nchịkọta weebụ nke ụka, Sinang sinbo (A maara n'asụsụ Bekee dị ka Weekly), ekwughị aha Park Yunmyŏng mgbe ọ na-akọ banyere nzukọ dị mkpa ma ọ bụ ọrụ ofufe. A kpọtụghị ya ikwu okwu ọbụla, ma ọ bụ bipụta ndụmọdụ ọ bụla nye ndị otu ụka a ka ha nọgidesie ike na nkuzi nna ya. A kpọghị ya aha dị ka onyeisi oche n’ememe ndị dị mkpa. N’afọ 2014, mmadụ ole na ole n’ime ndị ọ maara na mbụ bụ ndị hapụrụ ụka ahụ nwere ọgbakọ ndị nta akụkọ nke ha kwupụtara na ha kwenyere na ọ dịkwaghị ndụ ebe ọ bụ na anụbeghị ya kemgbe afọ 2005. Theka ekwetaghị ma ọ bụ gọọ akụkọ ahụ; enye ama ofụmi enye.
Ma onye ndu ha ọ ka dị ndụ ma ọ bụ na ọ nọghị, Churchka nke Nna Bi N’igwe gara n’ihu na-arụ ụlọ nzukọ ofufe 124 na Korea n’onwe ya yana ụka anọ na United States. A na-akpọ ụkọchukwu ụka kwanjang (isi nke ụlọ nzukọ na-eme ntọghata). Chọọchị anaghị eji okwu ndị bụ isi nke ndị Kraịst Korea maka ụkọchukwu, nke bụ moksa, ma ọ bụ jiri okwu ọdịnala Korea maka okenye ụka, changno, ebe ọ bụ na e debere okwu ahụ maka Park T'aesŏn. Kama, ọ na-akpọ ndị okenye ya sŭngsa. Utu aha nye ndị dị ala karịa ndị okenye nọ n’ọkwá dị elu bụ kwŏnsa na chipsa, bụ́ ndị a pụrụ ịsụgharị abụọ dị ka “diacon” ma ọ bụ “diaconess.” A na-enye ụfọdụ ndị ọzọ na-atụnye ụtụ n'ọrụ dị iche iche nke ụka aha chŏndosa, "onye nkwusa ozioma."
E nwere nnukwu ndakpọ nke ndị otu ụka mgbe Park T'aeson kwupụtara na 1980 na ya bụ Chineke nakwa na Akwụkwọ Nsọ juputara na ụgha. Ọdịda ọzọ dakwasịrị ọnwụ Park na 1990. Taa Churchka nke Nna Bi N’igwe pere mpe pere mpe karịa Olive Tree Movement dị n’afọ ndị 1960. Na 2011, ụka ahụ gwara gọọmentị na Seoul na ha nwere ndị otu 407,000. Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ ná ndị na-ekiri ihe ndị na-eme n'èzí na-eche na ọnụ ọgụgụ ahụ ruru 10,000.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ọdịda ahụ. Nke mbụ, Osisi Olive Movement dọtara ndị na-achọ ọgbakọ Ndị Kraịst. Ozugbo Park kwupụtara na 1980 na ọ ka Jizọs, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya hapụrụ. Nke abụọ, Park kwere ụmụazụ ya nkwa anwụghị anwụ. Mgbe ọ nwụrụ na 1990, ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya kpebiri na nke ahụ bụ nkwa ọ na-agaghị emezu. Nke ato, onye nọchiri ya Park Yunmyŏng abụghị naanị na ọ bụghị onye nkwusa na-adọrọ adọrọ nna ya bụ, ọbụghị nke doro anya na ọ ka na-eduga usoro ahụ. N'eziokwu, amabeghị onye na-elekọta ụka ugbu a. Ebe ọ bụ na Osisi Olive na mgbe emesịrị Chọọchị nke Nna nke Eluigwe na-adabere na mmụọ nke onye nchoputa, na-enweghị onye ndu yiri nke ahụ mgbe Paek T'aesŏn gafere, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na òtù ahụ ga-adaba. N'ikpeazu, site n'iwu nke ya ka nwoke na nwanyi ghara ibikọ n'otu, ulo uka achibidola na o bufeghi okwukwe site n'otu ọgbọ rue ozo. Ọ nwara imeri nsogbu ahụ site na ịdọta ndị na-eto eto mana enwebeghị ezigbo ihe ịga nke ọma.
A ghawo ụka ahụ nkatọ kpụ ọkụ n'ọnụ site n'aka ndị isi Korea. Korea Christian agbasaghị inwe oke olu na ha ikpe nke ihe ha kpọrọ "idan" (heresy). " Akpọrọrịrị Osisi Osisi Osisi idan na 1956 n'ihi nkwupụta nke ikike nke ike karịrị ike. Mgbe ọ katọrọ Bible na 1980, mkpu ndị ahụ mụbara nke ukwuu. Obi ilu a na-eme na chọọchị emeela ka e bo ya ebubo na chọọchị ahụ zoro ezo karịa ozu 1,000 na ebe a na-akwadoghị ili ozu, na ili ndị a na-egosi na enwere ike ịnwụ otu ma ọ bụ karịa na ala nke Kijang Village for the Faith. Nnyocha ndị uwe ojii mere ka akwadoghị ebubo ndị ahụ. Ka o sina dị, ntụpọ ka na-aza aha ụka n'ihi ebubo ndị a.
N’ime akara aka ọzọ na theka nke Eluigwe anaghị eme ọfụma dịka ọ na-eme na mbụ, ụlọ ọrụ dị iche iche ọ na-agba ọsọ nke na-ebubata ọtụtụ ego n’ụlọ ụka nke Nna nke Igwe (site n’ịwepụta ụdị ihe ndị ahụ dịka akwa dị elu. , sọks, na ọkụ eletrik) emechiela ugbu a. Ha enweghị ike ịsọ mpi na nnukwu ụlọ ọrụ dịka Hyundae na Samsung. Agbanyeghị, ha ka na-emepụta nri. N'oge na-adịbeghị anya, ha webatara tofu ejiri mmiri nke ndụ na soy sauce tinyekwa nke mmiri nke ndụ na mgbakwunye na yogọt dị obere kalori akpọrọ Run. Ha na-ere ngwongwo ndị a n'obere ụlọ ahịa, akpọrọ "Obodo Nta maka ụlọ ahịa Kwesịrị Ntụkwasị Obi," nke a na-ahụ na agbata obi na Republic of Korea niile. [Foto dị n'aka nri]
Ọdịnihu nke Chọọchị nke Nna nke Igwe adịghị mma. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị òtù ya ugbu a bụ ndị toro eto nke ndị malitere ịga na mmalite nke Park T'aesŏn na njedebe 1950s na 1960s. Ha adighi adọta ndi otu ohuru iji dobe onodu ndi ha no na ugbua, ma ha alaghachighachi na ndi Korea. Obodo mbu nke mbu maka ndi kwesiri ntukwasi obi, na Sosa na Tŏkso, bu ugbua ebe ulo ulo ndi mmadu di elu maka ndi mmadu. Enwere obere ihe akaebe, karịa ụlọ nzukọ ofufe fọdụrụnụ, na ha bụbu saịtị nke obodo nke ndị otu Olive Tree Movement. Obodo Kijang maka ndi Kwesịrị Ntụkwasị Obi na-adịgide ndụ mana etinyegoro ya ugbu a n'obodo South Korea nke abụọ kachasị ukwuu, Pusan. O doro anya oge ole ka ọ ga - enwe ike ijigide njirimara ya dị ka obodo dị iche ebe ndị kwere ekwe bi ma rụọ ọrụ. N’ezie, ọ bụghị ihe doro anya ogologo oge ụka nke Nna nke Igwe n’onwe ya ga-adịgide. N'ime iri afọ ole na ole, ọ nwere ike bụrụ ihe ọ bụla karịa ncheta, nke ndị ọkà mmụta mụrụ dị ka akụkụ nke okpukpe okpukpe Korea n'oge gara aga.
Image # 1: Park T'aesŏn na-ekwusa ozi ọma n'otu n'ime mmalite ụlọikwuu ya. Foto sitere n'aka Sinang sinbo.
Foto # 2: Asụsụ nke ọkụ na-apụta n'elu ndị na-efe ofufe n'otu n'ime mmalite mmalite nke Park T'aesŏn. Foto sitere n'aka Sinang sinbo.
Foto # 3: Nduru, akara nke Churchka nke Nna nke Igwe, na-arịgo n’elu ụlọ worshiplọ Nzukọ Alaeze nke Nna nke Eluigwe. Foto si n'aka Yuri Kim.
Foto # 4: Otu obere ụlọ ahịa nke Chọọchị nke Nna nke Igwe na-elekọta. Ihe ịrịba ama dị n’elu windo ụlọ ahịa na-akpọsa tofu na soy sauce nke e ji mmiri nke ndụ mee. Foto si n'aka Yuri Kim.
Baker, Don. 2002 “Hananim, Hanŭnim, Hanullim, na Hanŏllim: Nrụpụta nke Terminology maka Korean Monotheism.” Nyocha nke ọmụmụ Korea 5: 105-31.
Ch'oe, Chunghyŏn (최중현). 1998. "Park T'aesŏn yakchŏn (A Biographical osisi nke Park T'aesŏn, 박태선 약전)," Pp. 39-109 n'ime Malssŭm kwa Shinhak (The Okwu Chineke na Okpukpe, 말씀과신학, Osan, Korea: Mahadum Sunmoon.
Choe Joong-hyun (Ch'oe, Chunghyŏn). 1993. Agha Korea na otu ndị otu Mesaya: Ọnọdụ abụọ dị iche. Ph.D. akwukwo, Mahadum Syracuse.
Kim, Chang Han. 2007. Nhazi nke ndi otu ndi otu ndi Kristian, ndi ozo, na mmeghari ndi mmadu na Korea oge. Ph.D. akwukwo, Mahadum Calgary.
Kim, Chong-sŏk (김종석). 1999. “Chŏndogwan-esŏ Ch’ŏnbugyo-ero ŏi pyŏnhwa wa kọ twi.” (전도관 에서 천부교 에 로 의 변화 와 그 뒤 Nnyocha nke mgbanwe si Ch fromndogwan gaa Ch'nbugyo na mgbe e mesịrị). MA edemede, Mahadum Sunmoon.
Kim, Hong-ch'ŏl, Ryu Pyŏng-dŏk, na Yang Ŭn-yong (김홍철, 유병덕, 양은용), eds. 1997 Han'guk sinjonggyo silt'ae chosa pogosŏ (韓國 新 宗 敎 實 態 調査 報告 investigation Nnyocha nke ọnọdụ okpukpe ọhụrụ dị ugbu a na Korea) Iksan, Korea: Won'gwang University Center maka Ọmụmụ nke Okpukpe.
Kim, Tǔngyŏl (A). 1970. “Hankuk Yesu-kyo Chŏndo-gwan so-ko (A Study of Korean Christian Chŏndo-gwan, 한국 예수교 전도관 소고), Hyŏndaewa Shinhak (Ọha nke oge a na Okpukpe, 현대현대와신학 6: 208-28.
Kim, Heung-soo. 2012. "Okpukpe ma ọ bụ Korean Christianity: Mmegharị okpukpe nke Chọọchị Unification, Osisi Olive, na Yong Moon San Prayer Mountain." Okpukpe na Omenala 23: 15-36.
Moos, Felix. 1967. "Onye ndu na nhazi na Osisi Olive." Ọrụ nke Alaka Royal Asiatic Society Korea 43: 11-27.
Moos, Felix. 1964. "Asfọdụ Akụkụ nke Park Chang No Kyo: A Korean Revitalization Movement." Ngwurugwu nke Anthropological 37: 110-20.
Pak, Kiman (박기만). 1985. Han'guk sinhŭng chonggyo yŏn'gu (新 宗 敎 硏 究 Nnyocha banyere okpukpe ọhụrụ nke Korea). Kos gunng-egbe, Kyŏngnam, Korea: Hyerimsa.
Ogige Yŏnggwan (박영관). 1993. Idan chongp'a pip'an I (異端 宗派 批判) - A na m ekpe ụka okpukpe dị iche iche, katọrọ, Mpịakọta m) Seoul: Kidokkyo munsŏ sŏngyohoe.
T'ak Myŏnghwan (탁명환). 1994. Han'guk ŭi sinhŭng chonggyo: kidokkyo p˘yŏn I (한국 의 신흥 종교: 기독교 편 1 religions okpukpe ọhụrụ nke Korea: ndị nwere mgbọrọgwụ Ndị Kraịst, mpịakọta 1). Seoul: Kukche chonggyo munje yŏn'guso.